အကွောငျး & Plugin Archives | WikiWon
mujeer ဇန္နဝါရီလ 3, 20180မှတ်ချက်များ
On this page, you will be able to find Minimal Coming Soon & Maintenance Mode WordPress plugin with 1.45 ဗားရှင်း. Minimal Coming Soon & Maintenance Mode 1.45 has another old version too, comment to the version number of A2 Optimized WordPress plugin we will update it. The Minimal Coming Soon & Maintenance Mode plugin allows you to quickly & easily set upaComing Soon, Maintenance Mode or Launch Page for your website. Minimal Coming Soon & Maintenance Mode 1.45 WordPress ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Fore wordpress ကို DOWNLOAD လွယ်ကူလူမှုရေး SHARE button (Premium)
mujeer ဒီဇင်ဘာလ 27, 20170မှတ်ချက်များ
လွယ်ကူသောလူမှုဝေမျှမယ်သင့်ရဲ့ post ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်, ဒီနေ့ခေတ်လူတွေ WordPress ကိုသုံးစွဲဖို့လိုလား, ကောင်းမွန်သောလမ်းပြပလက်ဖောင်းနှင့်ဖြစ်လာခြင်း. ကျနော်တို့ဒီဇိုင်နာကဲ့သို့ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကိုပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်လူမှုဝေမျှမယ် Button လေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူကိုကောင်းမွန်သောအသိစိတ်အားထက်သန်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုစိတ်ကြိုက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုငှားရမ်းရန်သွားရလိမ့်မယ်, post ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလွယ်ကူလူမှုဝေမျှမယ်ခလုတ်ဖြစ်ပါသည်, wikiwon is becoming now to share all of you about this one and we are about to write an article this EASY SOCIAL SHARE BUTTONS FOR WORDPRESS DOWNLOAD ဆက်ဖတ်ရန် [...]
WordPress ကိုအတွက်ခေတ်ကန့်သတ် add ဖို့ကိုဘယ်လို
mujeer အောက်တိုဘာလ 25, 20170မှတ်ချက်များ
အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့် site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်ဧည့်သည်ကန့်သတ်ရန်, သငျသညျ WordPress ကိုအတွက်လုပျနိုငျ. သငျသညျ WordPress ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်ကြပြီးအကွောငျးရငျးမြားစှာအတှကျ WordPress ကိုဘလော့ဂ်ထဲမှာအသက်အရွယ်ကန့်သတ် add ချင်လျှင်သင်ဆောင်းပါး၏ကျန်ဖတ်နေကလုပျနိုငျ. ဤဆောင်းပါး၌, ငါ WordPress ကိုအတွက်အသက်ကန့်သတ် add ဖို့ဘယ်လိုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်သစ်များစုရုံးနှင့်သင်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ဖွငျ့ဤခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာလျှင်သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအသက်အရွယ်ကန့်သတ် add နိုင်ပါလိမ့်မည်. Protect your site from hackers and make sure you add brute force ဆက်ဖတ်ရန် [...]
HTML is one of the basic web language that helps you to make new static websites. But after the invention of WordPress you can now install WordPress and create 12 different kind of sites with WordPress. Easy way to add HTML forms in WordPress is here. ဤဆောင်းပါး၌, I have come with new WordPress HTML forms that you can use within your WordPress sites. How to add HTML Forms in WordPress HTML Forms is not just another form plugin because it comes with some pretty amazing features. You can't ဆက်ဖတ်ရန် [...]
mujeer အောက်တိုဘာလ 1, 20170မှတ်ချက်များ
Professional WordPress Top Most Popular WordPress platform to providing the basic website improvement by ourselves, may be interested in using this platform on wikiwon, you should take your website, hope WordPress Platform you will be liked will createatheme for yourself, Two important things there are, WordPress Official for you? When you able to createanew website on WordPress Platform that important thing may be very carefully for? In this post share you the WordPress Theme Development ဆက်ဖတ်ရန် [...]